Kaniisadda, oo ah Jidhka Masiixa, waa bulshada dhammaan kuwa rumeysan Ciise Masiix ee Ruuxa Quduuska ahi ku dhex nool yahay. Hawsha Kaniisadda ayaa ah wacdinta injiilka, in la baro wax walba oo Masiixu ku faray, baabtiiskii, iyo daaqsintii adhiga. Marka la guto waajibaadka, Kaniisadda, oo uu ku hoggaamiyo Ruuxa Quduuska ah, waxay qaadataa Kitaabka Quduuska ah hagitaan waxaana si joogto ah u hogaamiya Ciise Masiix, madaxdeeda nool (1 Korintos 12,13:8,9; Rooma 28,19: 20; Matayos 1,18: 1,22; Kolosay; Efesos).
Kaniisadda waxay u tahay shir quduus ah
"... Kaniisadda looma abuurin isu imaatin dad wadaaga fikir isku mid ah, laakiin waxaa sameysmaya kulan 'rabaani ah' ..." (Barth, 1958: 136). Marka loo eego aragtida casriga ah, qofku wuxuu ka hadlayaa kaniisada markii dadka leh caqiidooyin la mid ah ay ku kulmaan cibaadada iyo tilmaamaha. Si kastaba ha noqotee, kani ma ahan mid si adag u eegaya kitaabiga ah.
Masiixu wuxuu sheegay inuu dhisi doono kaniisaddiisa iyo in irdaha cadaabta aysan ka dulqaadan doonin (Matayos 16,16: 18). Kani ma aha Kaniisadda Aadanaha, laakiin waa Kaniisadda Masiixa, "Kaniisadda Ilaaha nool" (1 Timoteyos 3,15) iyo kaniisadaha maxalliga ah waa "kaniisadihii Masiixa" (Rooma 16,16).
Sidaa darteed kaniisaddu waxay fulisaa ujeedo rabbaaniya. Waa doonista Ilaah ee ah inaan “ka tagin jameecooyinkayaga sidii qaar looga tago” (Cibraaniyada 10,25). Kaniisaddu ma aha ikhtiyaar, sida qaar u maleynayaan; Eebbe wuxuu raalli ka yahay inay Masiixiyiintu kulmaan.
Ereyga Griiga ee kaniisadda, oo sidoo kale u dhigma erayga Cibraaniga ee shirka, waa ekklesia, waxayna tilmaamaysaa koox dad ah oo loogu yeedhay ujeedo. Ilaah had iyo jeer wuxuu ku luglahaa abuurista bulshooyinka rumaystayaasha. Waa Eebbe dadka kulmiya Kaniisadda.
Axdiga Cusub dhexdiisa, ereyada kaniisadda ama kaniisadda waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo kaniisadaha guryaha sidaan maanta u naqaanno (Rooma 16,5; 1 Korintos 16,19; Filiboy 2), bulshooyinka magaalooyinka (Rooma 16,23:2; 1,1 Korintos 2: 1,1; Tesaloniika), bulshooyinka ku baahsan aag dhan (Falimaha Rasuullada 9,31:1; 16,19 Korintos 1,2; Galatiya), iyo sidoo kale in lagu sharaxo guud ahaan bulshada rumaystayaasha adduunka la yaqaan.
Kaniisadda macnaheedu waa kaqeybgalka bulshada ee Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Masiixiyiintu waxay ku dhex jiraan bulshada wiilkiisa (1 Korintos 1,9), Ruuxa Quduuska ah (Filiboy 2,1) aabaha (1 Yooxanaa 1,3) waxaa loogu yeedhay in si aynu ugu socono iftiinka Masiixa "aynu is lahaano wadaag" (1 Yooxanaa 1,7).
Kuwa aqbala Masiixa way ka taxadaraan inay "ku sii hayaan midnimada xagga ruuxa iyada oo loo marayo isku xidhnaanta nabadda" (Efesos 4,3). In kasta oo ay kala duwanaantu ku kala duwan yihiin rumaystayaasha, haddana isu-duubnaantooda ayaa ka xoog badan wixii khilaafaad ah. Farriintan waxaa lagu adkeeyay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu muhiimsan ee loo adeegsado kaniisadda: in kaniisaddu ay tahay "jirka Masiixa" (Rooma 12,5; 1 Korintos 10,16; 12,17; Efesos 3,6; 5,30; Kolosay 1,18).
Xertii asalka ahayd waxay ka yimaadeen asal kala duwan umana muuqan inay si dabiici ah u soo jiiteen wehelnimada. Ilaah wuxuu rumaystayaasha uga yeeraa dhammaan heerarka nolosha oo dhan wada jir ahaaneed.
Rumaystayaashu waa "xubno" gudaha bulshada guud ama kaniisadda guud ee Kaniisadda (1 Korintos 12,27:12,5; Rooma), shaqsiyaddan uma baahna khatar gelin midnimadeenna, maxaa yeelay "dhammaanteen waxaa laydinku baabtiisay jidh qudha," (1 Korintos 12,13).
Kuwa rumaysadka leh ee adeeca, si kastaba ha ahaatee, ma keenaan kala qaybsanaan iyagoo ku murmaya oo ku adkaanaya ku adkaysashada aragtidooda; halkii, waxay siinayaan cashuur xubin kasta, sidaa darteed "jidhka kuma kala qaybsanaan", laakiin "xubnahu way isdaryeelaan si isku mid ah" (1 Korintos 12,25).
“Kaniisaddu waa… waa noole wadaaga isla nolosha - nolosha Masiixa (Jinkins 2001: 219).
Bawlos sidoo kale wuxuu kaniisadda ku barbardhigayaa “meeshuu Ilaah ku yaal Ruuxa,”. Waxa uu sheegay in rumaystayaashu “iskugu xidhan yihiin” dhisme “ku koraya macbudka quduuska ah ee Rabbiga” (Efesos 2,19: 22). 1 Korintos 3,16:2 iyo 6,16 Korintos wuxuu sidoo kale tilmaamayaa fikradda ah in kaniisaddu ay tahay macbudka Ilaah. Sidoo kale, Butros wuxuu isbarbardhigayaa Kaniisadda “guri ruuxiga ah” oo rumaystayaashu samaysteen "wadaadnimo boqornimo, dad quduus ah" (1 Butros 2,5.9). Qoyska waxay tusaale u yihiin kaniisada
Bilowgii, kaniisadda waxaa badanaa loo gudbiyey oo u shaqeeya sidii nooc ka mid ah qoyska ruuxiga ah. Rumaystayaasha waxaa lagu magacaabaa "walaalo" iyo "walaalo" (Rooma 16,1: 1; 7,15 Korintos 1:5,1; 2 Timoteyos 2,15; Yacquub).
Dembigu wuxuu inaga soocayaa ujeeddada Eebbe ee innaga, iyo midkeen kasta oo xagga ruuxa ku hadla, wuxuu noqonayaa cidlo iyo agoon. Rabitaanka Ilaahay ayaa ah "in guriga la keeno cidlada" (Sabuurradii 68,7) in la soo qaado kuwa xagga ruuxa ah ee la go'doomiyo bulshada kiniisadda, oo ah "guriga Ilaah". (Efesos 2,19).
Taasna «reerka [qoyska] ee iimaanka (Galatiya 6,10), rumaystayaasha waxaa lagu quudin karaa jawi aamin ah loona beddeli karaa muuqaalka Masiixa dartiis, taas oo sidoo kale xiriir la leh Yeruusaalem. (Magaalada Nabadda) taasi waa halkaa (sidoo kale eeg Muujintii 21,10), "Dhamaanteen waxaan nahay hooyooyinka" (Galatiya 4,26).
Sawir qurxoon oo qurux badan ayaa kaniisada uga hadlaya sida aroosadda Masiix. Waxaa ku xusan astaamaha astaamaha kala duwan, oo ay ku jiraan Gabayga Heesta. Meel muhiim ah ayaa ah Heesta Heesaha 2,10: 16, halkaasoo aroosadda gacaliyaheeda ay sheegto in xilligeedii jiilaalka uu dhammaaday haddana waqtigii heesaha iyo farxadda ay timid (sidoo kale eeg Cibraaniyada 2,12), iyo sidoo kale halka ay aroosaddu ku leedahay: "saaxiibkay aniga ayaa iska leh oo aniga ayaa ah" (St. 2,16). Kaniisadda waxaa iska leh shaqsi ahaan ama si wada jir ahba Masiixa oo isagaa iska leh Kaniisadda.
Iyada oo ka tarjumaysa boqortooyada Ilaah ee hadda jirta iyo tan mustaqbalka, kaniisadda waxay u eg tahay iniin khardal ah oo ku koray geed ay shimbiraha cirku magan galaan (Luukos 13,18: 19); iyo sida khamiir dhex socda cajiinka dunida (Luukos 13,21), iwm. Kaniisadda waxay ahayd Howlgalka
Bilowgii, Ilaah wuxuu u yeedhay dad gaar ah inay shaqadiisa ku qabtaan dhulka. Wuxuu u soo diray Ibraahim, Muuse iyo nebiyada. Wuxuu u diray Yooxanaa Baabtiisaha si uu ugu diyaariyo jidka Ciise Masiix. Markaas isagu Masiix naftiisa ayuu u soo diray badbaadadeenna. Wuxuu sidoo kale u soo diray Ruuxiisa Quduuska ah si uu u dhiso kaniisadiisa oo u adeegsata injiilka. Kaniisadda ayaa sidoo kale loo diraa adduunka. Shaqadan injiilku waa mid aasaasi ah oo fulinaysa ereyadii Masiixa ee uu u soo diray taageerayaashiisa si ay u sii wadaan shaqadii uu bilaabay (Yooxanaa 17,18-21). Taasi waa macnaha «howlgalka»: in Eebbe u soo diro si uu u guto ujeedkiisa.
Kaniisad ma aha dhammaadkeeda mana aha inay kaligeed jiri karto. Tan waxaa lagu arki karaa Axdiga Cusub dhexdiisa, Falimaha Rasuullada. Buugga oo dhan, faafin injiilka iyada oo la adeegsanayo wacdinta iyo dhisidda kaniisadaha ayaa ahayd hawl weyn (Falimaha Rasuullada 6,7: 9,31; 14,21:18,1; 11:1; 3,6; Korintos iwm).
Bawlos wuxuu tilmaamayaa kaniisadaha iyo Masiixiyiin gaar ah oo kaqeyb gala "Bulshada Injiilka" (Filiboy 1,5). Waxaad kula dirirtaa isaga injiilka (Efesos 4,3).
Waxay ahayd kaniisaddii ku taal Antiyokh ee Bawlos iyo Barnabas ay u direen safarradooda howleed (Falimaha Rasuullada 13,1: 3).
Kaniisadda Tesaloniika waxay tusaale u noqotay dhamaan rumaystayaasha Makedoniya iyo Achaja. Ereygii Rabbiga ayaa iyaga ka yimid oo ma aha Makedoniya iyo Akhaya dhexdooda oo keliya, laakiinse xataa meela kale oo dhan. Aamminaadooda xagga Eebbe waxay dhaaftay xadkooda (2 Tesaloniika 1,7: 8).
Bawlos wuxuu qoray in Timoteyos uu ogaado inuu u dhaqmo "guriga Ilaah, taasi waa kaniisadda Ilaaha nool, tiir iyo aasaaska runta" (1 Timoteyos 3,15).
Mararka qaarkood dadku waxay dareemi karaan in fahamkooda runta ay ka badan yihiin fahamka kaniisadda ay ka heleen Ilaah. Tani waxay u badan tahay haddii aan xasuusano in Kaniisaddu ay tahay "aasaaska runta"? Kaniisaddu waa meesha runta lagu dhiso barashada hadalka (Yooxanaa 17,17).
Waxay ka tarjumaysaa "buuxnaanta" ee Ciise Masiix, madaxeeda nool, "oo wax walba ku oofiya wax walba" (Efesos 1,22: 23), Kaniisada Axdiga Cusub waxay kaqeybqaataa shaqooyinka adeegga (Falimaha Rasuullada 6,1: 6-1,17; Yacquub, iwm) wehelnimada (Falimaha Rasuullada 2,44: 45-12; Yuudas)., Hirgelinta amarrada kaniisadda (Falimaha Rasuullada 2,41; 18,8; 22,16; 1 Korintos 10,16-17; 11,26) iyo cibaadaysiga (Falimaha Rasuullada 2,46: 47-4,16; Kolosay, iwm).
Kaniisadaha ayaa ku hawlanaa caawinta midba midka kale, waxaana lagu muujiyey gargaarka la siiyay kaniisadda Yeruusaalem waqti cunto yari ka jirtay (1 Korintos 16,1: 3). Markaan si dhow u eegno waraaqaha rasuul Bawlos waxay muujineysaa in jameecadihii ay wada xiriireen oo ay isku xirnaayeen. Kaniisad kuma jirin cid gooni ah.
Daraasad lagu sameeyay nolosha kaniisadda ee Axdiga Cusubi waxay muujisay hannaan lagula xisaabtamo kaniisada maamulka kaniisada. Gole kastaa wuxuu la xisaabtami lahaa awooda kaniisada ka baxsan dhaqankeeda dhaqameed ama qaab maamul. Waa la arki karaa in kaniisadda Axdiga Cusubi ay ahayd beel ka mid ah kaniisadaha maxalliga ah oo si wada jir ah loogu qabto isla xisaabtanka wadajirka ah ee caqiidada Masiixa ee ay rasuulladu baray. (2 Tesaloniika 3,6: 2; 4,13 Korintos).